“Waxay u eg-tahay in caalamku tix-gelin buuxda siiyay Go’aankii gooni isu taaga Somaliland.” | FooreNews
Home wararka “Waxay u eg-tahay in caalamku tix-gelin buuxda siiyay Go’aankii gooni isu taaga Somaliland.”
“Waxay u eg-tahay in caalamku tix-gelin buuxda siiyay Go’aankii gooni isu taaga Somaliland.”
fooreFeb 26, 2012wararka0
Hargeysa (Foore)- Guddoomiyaha Golaha Wakiiladda Somaliland Md. C/Raxmaan Maxamed Cabdilaahi (Cirro) ayaa sheegay in natiijadda shirweynihii London ay ka muuqato in caalamku uu tixgelin siiyay go’aanka madax-banaanida Somaliland.
Guddoomiyuhu waxa kale oo uu sheegay in beesha caalamku ay kala fahmeen in Somaliland iyo Somalia ay yihiin laba wadan oo kala duwan.
Md. C/Raxmaan Cirro oo ka hadlayay aragtidiisa shirkii London wuxuu yidhi “Caalamku wuxuu imika aqoonsaday in Somaliland iyo Somalia ay imikana yihiin horena u ahaayeen laba dal oo kala duwan oo lixdankiina midoobay, haddana iyadoo la raacayo go’aankii Somaliland ee 18-kii May 1991-kii labada dawladood oo kala gaar ah ayuu go’aankaasi caalamka tusayaa. Somalia caalamku wuu aqoonsan yahay Somaliland-na ma aqoonsana, markaa waxay u eg-tahay in caalamku Somaliland tix-gelin buuxda siiyay go’aankii gooni isu taaga Somaliland.”
“Sidaad ka war-qabtaan waxa shirkaasi ka soo qeyb galay qeybo badan oo Soomaaliya ah, laakiin wuxuu go’aanka shirku tilmaamayaa in qeybahaasi kala duwani ay isku mid qudha oo Soomaaliya ah wada yihiin, Somaliland-na ay qeyb gaar ah tahay,”ayuu yidhi Guddoomiyaha Golaha Wakiiladdu.
Md. C/Raxmaan Maxamed Cabdilaahi oo hadalkiisa sii watay wuxuu yidhi “Wada-hadalka duniduna waxa in hoosta laga xariiqo u baahani waxa weeye Somaliland iyo Somalia, Somaliland ayaa gobanimadda ka hor qaatay oo waxay qaadatay 26-kii June 1960-kii, Soomaaliyana waxay qaadatay 1-dii July 1960-kii. Markaa in labada wadan ay u wada hadlaan oo caalamku soo dhaweeyay macnaheedu waxa weeye wakhti ku munaasib ah maadaama oo aynu wakhti badan isku jirnay oo wax badani ina dhex mareen oo dawlad qudha isku ahayn.”
Guddoomiyuhu wuxuu sheegay in caalamka uu soo maray qadiyado la mid ah ta Somaliland, waxaanu xusay inay ka mid yihiin Itoobiya iyo Ereteriya, Suudaan iyo Koonfurta Suudaan iyo wadamo kale oo yurub ah, waxaanu ku dooday in dawladahaasi ay ku kala baxeen wada hadal .
“Dawladahaasi kala noqday qaar way wada hadleen, qaarna waxa jiray cid sadexaad oo ku dhex jirtay oo dhex dhexaadisay, aniga fikirkayga shakhsiyan waxa ila macquulsan in cid sadexaad ku dhex jirto oo la wakhtiyeeyo. Waxa laga wada hadlayaa ma aha midnimo Soomaaliyeed ee waxa laga wada hadlayaa waxa weeye sida Somaliland iyo Somalia u kala baxayaan oo ay u noqonayaan labada wadan oo jaar ah.”ayuu yidhi Guddoomiyaha Golaha Wakiiladda oo maanta u waramayay Telefishanka madaxa banaan ee Horn Cable TV.
Previous PostCiidanka Booliska oo ka hadlay Eedaysane Cawar Xareed oo ay gacanta ku dhigeen Next PostWasiirka Arrimaha Dibadda oo ka hadlay masaalixda Somaliland uga soo baxay shirkii London